ဆွီဒင်ကို မဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားရမယ့် ဂျာမနီ
ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်တက်ရောက်ခွင့် ရယူမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့မက္ကဆီကို၊ ဆွီဒင်ကို မဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားရမယ့် ဂျာမနီ
23 Jun 2018 . 3:00 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုပွဲစဉ်တွေအဖြစ် ဒီနေ့(စနေ)မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံ-တူနီးရှား၊ တောင်ကိုရီးယား-မက္ကဆီကို၊ ဂျာမနီ-ဆွီဒင်ပွဲတွေ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပနားမားကို အနိုင်ယူပြီး (၃)မှတ်ရထားတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း တူနီးရှားကို ဆက်လက်အနိုင်ကစားပြီး ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် တက်ရောက်ခွင့်ရယူနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ အဖွင့်ပွဲမှာ ဂျာမနီကို အနိုင်ကစားခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းကလည်း တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဆုံတွေ့နေတာကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖုိ့အခြေအနေကောင်းနေတယ်။ နာမည်ကြီးဂျာမနီကတော့ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်တို့လို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ရအောင် ဆွီဒင်ကို မဖြစ်မနေအနိုင်ကစားရတော့မှာပါ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် တူနီးရှား (၂၃-၆-၂၀၁၈ ညနေ ၆း၃၀)
အသင်းကြီးတွေထဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းက အားရစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ချန်ပီယံဆုကို မျှော်လင့်လို့ရနိုင်တဲ့အထိ အခြေအနေကောင်းနေတယ်။ လူကာကူ Lukaku ၊ ဟာဇက် Hazard ၊ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ၊ မာတင်စ် Mertens တို့ရဲ့ တိုက်စစ်အစုအဖွဲ့က ဘယ်လိုပြိုင်ဘက်မျိုးကိုမဆို ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိနေတယ်။ အာဖရိကအသင်း တူနီးရှားရဲ့ခြေစွမ်းကလည်း မာကျောပါတယ်။ အဖွင့်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဒုက္ခပေးခဲ့ပြီး ဟာရီကိန်း Harry Kane ရဲ့ နောက်ကျဂိုးကြောင့်သာ အမှတ်မရခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲမှာလည်း ဘယ်လ်ဂျီယံကို ခံစစ်အသားပေးပုံစံနဲ့ ဒုက္ခပေးဦးမှာပါပဲ။ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း ဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ခက်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ အနိုင်(၃)မှတ်ကိုတော့ ရယူသွားမှာပါ။
တောင်ကိုရီးယား နှင့် မက္ကဆီကို (၂၃-၆-၂၀၁၈ ည ၉း၃၀)
ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ခြေစွမ်းက သာမန်ထက် မပိုခဲ့ဘူး။ အဓိက ကစားသမားလို့ပြောရမယ့် ဆွန်ဟောင်မင် Son Heung-Min ကလည်း ထင်သလောက် ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် သူ့ကို ဦးတည်းကစားတဲ့ တောင်ကိုရီးယားအသင်းလည်း ရုန်းကန်ရတော့တာပါပဲ။ ဂျာမနီကို အနိုင်ကစားခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အထင်ကြီးစရာပါ။ အသင်းမှာလည်း Quality Players တချို့ပါဝင်တာကြောင့် မာကျေမှုလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက အမှတ်မရသေးတဲ့ တောင်ကိုရီးယားအသင်းရဲ့ ရုန်းကန်အားပါပဲ။ မက္ကဆီကိုအသင်း လွယ်လွယ်ကူကူတော့ အနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘဲ အကြိတ်အနယ်ကစားပြီးမှ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ရလဒ်နဲ့ နိုင်ပွဲရသွားဖို့များတယ်။
ဂျာမနီ နှင့် ဆွီဒင် (၂၄-၆-၂၀၁၈ နံနက် ၁၂း၃၀)
မက္ကဆီကိုကို မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ဂျာမနီမှာ ဖိအားတွေရှိနေပါတယ်။ ကွင်းလယ်နဲ့ ခံစစ်မှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းကို အခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဆွီဒင်ကလည်း မက္ကဆီကိုလိုပဲ Counter အသားပေးပုံစံနဲ့ ဂျာမနီကို ရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိနေတယ်။ ဥရောပတိုက်က အသင်းတွေဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ဆုံတွေ့နေတာကြောင့် တစ်သင်းရဲ့အနေအထားကို တစ်သင်း ကောင်းကောင်းခန့်မှန်းနိုင်လိမ့်မယ်။ အမှတ်မရသေးတဲ့ ဂျာမနီထက် (၃)မှတ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆွီဒင် Pressure ကင်းကင်းနဲ့ ကစားလို့ရတယ်။ သရေကျဖို့များပြီး ဂျာမနီနိုင်ရင်တောင် ဂိုးမပြတ်ပါဘူး။
Photo:AM 1590 The ANSWER
ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့တကျရောကျခှငျ့ ရယူမယျ့ ဘယျလျဂြီယံနဲ့မက်ကဆီကို၊ ဆှီဒငျကို မဖွဈမနေ အနိုငျကစားရမယျ့ ဂြာမနီ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစုပှဲစဉျတှအေဖွဈ ဒီနေ့(စနေ)မှာ ဘယျလျဂြီယံ-တူနီးရှား၊ တောငျကိုရီးယား-မက်ကဆီကို၊ ဂြာမနီ-ဆှီဒငျပှဲတှေ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။ ပနားမားကို အနိုငျယူပွီး (၃)မှတျရထားတဲ့ ဘယျလျဂြီယံအသငျး တူနီးရှားကို ဆကျလကျအနိုငျကစားပွီး ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ တကျရောကျခှငျ့ရယူနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ အဖှငျ့ပှဲမှာ ဂြာမနီကို အနိုငျကစားခဲ့တဲ့ မက်ကဆီကိုအသငျးကလညျး တောငျကိုရီးယားနဲ့ ဆုံတှနေ့တောကွောငျ့ နောကျတဈဆငျ့တကျဖုိ့အခွအေနကေောငျးနတေယျ။ နာမညျကွီးဂြာမနီကတော့ ပွငျသဈ၊ အီတလီ၊ စပိနျတို့လို အဖွဈဆိုးမြိုးနဲ့မကွုံတှရေ့အောငျ ဆှီဒငျကို မဖွဈမနအေနိုငျကစားရတော့မှာပါ။
ဘယျလျဂြီယံ နှငျ့ တူနီးရှား (၂၃-၆-၂၀၁၈ ညနေ ၆း၃၀)
အသငျးကွီးတှထေဲမှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးရဲ့ခွစှေမျးက အားရစရာအကောငျးဆုံးဖွဈနပွေီး ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှေ ပါဝငျနတောကွောငျ့ ခနျြပီယံဆုကို မြှျောလငျ့လို့ရနိုငျတဲ့အထိ အခွအေနကေောငျးနတေယျ။ လူကာကူ Lukaku ၊ ဟာဇကျ Hazard ၊ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ၊ မာတငျဈ Mertens တို့ရဲ့ တိုကျစဈအစုအဖှဲ့က ဘယျလိုပွိုငျဘကျမြိုးကိုမဆို ခွိမျးခွောကျနိုငျစှမျးရှိနတေယျ။ အာဖရိကအသငျး တူနီးရှားရဲ့ခွစှေမျးကလညျး မာကြောပါတယျ။ အဖှငျ့ပှဲမှာ အင်ျဂလနျကို အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ဒုက်ခပေးခဲ့ပွီး ဟာရီကိနျး Harry Kane ရဲ့ နောကျကဂြိုးကွောငျ့သာ အမှတျမရခဲ့တာပါ။ ဒီပှဲမှာလညျး ဘယျလျဂြီယံကို ခံစဈအသားပေးပုံစံနဲ့ ဒုက်ခပေးဦးမှာပါပဲ။ ဘယျလျဂြီယံအသငျး ဂိုးပွတျနိုငျဖို့ခကျပမေယျ့ လိုအပျတဲ့ အနိုငျ(၃)မှတျကိုတော့ ရယူသှားမှာပါ။
တောငျကိုရီးယား နှငျ့ မက်ကဆီကို (၂၃-၆-၂၀၁၈ ည ၉း၃၀)
ဆှီဒငျနဲ့ပှဲမှာ တောငျကိုရီးယားရဲ့ခွစှေမျးက သာမနျထကျ မပိုခဲ့ဘူး။ အဓိက ကစားသမားလို့ပွောရမယျ့ ဆှနျဟောငျမငျ Son Heung-Min ကလညျး ထငျသလောကျ ခွစှေမျးမပွနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ကို ဦးတညျးကစားတဲ့ တောငျကိုရီးယားအသငျးလညျး ရုနျးကနျရတော့တာပါပဲ။ ဂြာမနီကို အနိုငျကစားခဲ့တဲ့ မက်ကဆီကိုအသငျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက အထငျကွီးစရာပါ။ အသငျးမှာလညျး Quality Players တခြို့ပါဝငျတာကွောငျ့ မာကမြှေုလညျးရှိပါတယျ။ တဈခုစဉျးစားရမှာက အမှတျမရသေးတဲ့ တောငျကိုရီးယားအသငျးရဲ့ ရုနျးကနျအားပါပဲ။ မက်ကဆီကိုအသငျး လှယျလှယျကူကူတော့ အနိုငျရမှာမဟုတျဘဲ အကွိတျအနယျကစားပွီးမှ ကဉျြးမွောငျးတဲ့ရလဒျနဲ့ နိုငျပှဲရသှားဖို့မြားတယျ။
ဂြာမနီ နှငျ့ ဆှီဒငျ (၂၄-၆-၂၀၁၈ နံနကျ ၁၂း၃၀)
မက်ကဆီကိုကို မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ဂြာမနီမှာ ဖိအားတှရှေိနပေါတယျ။ ကှငျးလယျနဲ့ ခံစဈမှာ အားနညျးခကျြတှရှေိနပွေီး ပွိုငျဘကျအသငျးကို အခှငျ့အရေးပေးသလိုဖွဈနတေယျ။ ဆှီဒငျကလညျး မက်ကဆီကိုလိုပဲ Counter အသားပေးပုံစံနဲ့ ဂြာမနီကို ရငျဆိုငျသှားဖို့ရှိနတေယျ။ ဥရောပတိုကျက အသငျးတှဖွေဈပွီး မကွာခဏ ဆုံတှနေ့တောကွောငျ့ တဈသငျးရဲ့အနအေထားကို တဈသငျး ကောငျးကောငျးခနျ့မှနျးနိုငျလိမျ့မယျ။ အမှတျမရသေးတဲ့ ဂြာမနီထကျ (၃)မှတျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဆှီဒငျ Pressure ကငျးကငျးနဲ့ ကစားလို့ရတယျ။ သရကေဖြို့မြားပွီး ဂြာမနီနိုငျရငျတောငျ ဂိုးမပွတျပါဘူး။
by Ko Kyue . 25 mins ago